မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သဘောထား | မေတ္တာရိပ်
← Dhamma Is For Everyone
… မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေ ကိုလေ့လာ ကြည့်ရင်
မြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်မတို့ ပိုလို့ကြည်ညို လေလေပါပဲရှင်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟာ လုံးဝအပြည့်အ၀ လွတ်လပ်မှူ ရှိတယ်။
ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လုပ်တာကိုမှ ဘုရားကလဲတန်းဖိုးထားတယ်။
Similar Post In English Version : Please Click Here
အနန္နစကြာဝဠာအတွင်းရှိ လူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တ၀ါအနန္နတို့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပြီး သူတော်ကောင်းတရားတို့နှင့်မွေ့လျှော်နိုင်ကြပါစေရှင်။ ………………………………………….
This entry was posted in ဗုဒ္ဓ သြ၀ါဒများ. Bookmark the permalink.